यस्तो आउला ओलीको काउन्टर प्रतिवेदन ? (पूर्णपाठ) - NepalDut NepalDut
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा २० पेज लामो राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रचण्डको प्रतिवेदनको खण्डनका लागि समय चाहिएकाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १३ गतेसम्मका लागि समय मागेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदनविरुद्ध ओलीको प्रस्ताव कस्तो आउला ? धेरैको जिज्ञासा छ। मेरो विचारमा ओलीको प्रतिवेदन यस्तो आएमा नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुनेछ। आउला त ओलीको यस्तो प्रस्ताव ? त्यसका लागि त मंसीर १३ सम्म कुर्नैपर्छ। तर, आम कार्यकर्ता चाहन्छन् ओलीको प्रस्ताव यस्तो आओस्।